Oromoom ukkamfamu malee ukkaamsuu hin beekuu? – Welcome to bilisummaa
Oromoom ukkamfamu malee ukkaamsuu hin beekuu?
Maqaan isaa Takiluu Bulchaa jedhama.
Maqaa addaa Bokkaa jedhamuun beekama.
Bakki dhaloota isaa Magaalaa Najjooti. Yuunivarsiitii FINFINNEE kiiloo 4 Muummee Geology/Earth Science kan seene ALI tti bara 1992 ture. Haa ta’u malee Gidiraama Wayyaaneen irraan ga’aa turteen barumsa isaa addaan kutee Jooraa turee waggaa Muraasaafis mana hidhaa Qaallittii keessa turee erga ba’ee booda, bara 2003 ALItti Mooraatti deebi’ee. Bara 2005 ALItti Eebbifamee ba’uudhaan Ji’a 3 project Gibe III keessa erga hojjetee booda, deebi’ee Ministeera Albuudaa Kan Magaalaa Finfinnee Naannoo Magganaanyaa Shoolaatti argamu keessa dorgomee gale. Kanaan booda Achi keessa naannoo ji’a 6tiif dalageera. Osoo kanaan jiruu Fiildiitiif ergamee Naannoo uummata Kibbaa keessa Ji’a 3’f dalagaa turee Gara Finfinneetti akkuma deebi’een Guyyaa 2 erga bulee booda dhabamsiisani. Hiriyaa fi maatiin issa iraa akka baree innii galuu dhabnan itii bilbilaa isaas yaalaanii dadhabuu issani nu ibsaan. Hiriyyoota isa waliin hojjetani ijoollee Habashaa tokko gaafatanii akka inni dalagaarra hin jirre tahuu issa baraan.Gaafa June 04-2014 iraa jalqabee ykn san duraas tahuu mala kan dhabamuu issa bekkamee duubaa yaa oromoo
Namoonii issaa kana beytaan warraa issa walin wal qunamsissu dhaf please toohadha tii halaa inii itii jiruu gara facebook inbox tii nu ergaa galatomaa
Previous Baha Oromiyaa; Lafee ilmaan Oromoo Hammarreessa
Next Master Plaaniin Finfinnee magaalota addaa Oromiyaa ka Miidhu miti jedhu Angwoonni